Ikhamera efihliweyo yeLampu ye-OMG (SPY030) -Izisombululo ze-OMG
I-TOP SPY efihliweyo yeKhamera erekhodiweyo yelizwi kunye ne-Detector yeOfisi, iKhaya, ngaphakathi / ngaphandle kweNdlu (eSingapore / eJakarta)
Whatsapp: Singapore + 65 8333-4466, Jakarta +62 81293-415255 (51 Ubi Ave 1 # 05-07A Inqanaba 7, S408933 - Vula: Mon-Sat: 10 am-6pm)
Ukurekhoda ukurekhodwa kwelizwi
Ikhamera efihliweyo ye-OMG Ikhamera efihliweyo (SPY030)
UKUPHAKATHI KWE-ANGLE: I-360-Degree panoramic view angle nge-1/3 "fisheye Lens, akukho ndawo imfama, jonga igumbi lonke kumgangatho wevidiyo omangalisayo we-HD emini okanye ebusuku (ngeNight Vision). Ifomathi yevidiyo ye-960P ye-HD: 1280 × 1024 (1.3MP) Isisombululo ngombala wokwenyani ngefomathi yoxinzelelo ye-H.264.
UKUSETYENZISWA KWENKQUBO: Fumana ulwazi malunga nayo yonke intshukumo endlwini yakho nge-imeyile, i-FTP okanye ugcine izilumkiso kwi-Micro SD. Iimvakalelo zokufumanisa intshukumo 'ziyaziva' xa kukho into ehamba egumbini kwaye ziya kukwazisa kwangoko. Ukufezekisa iliso
UMBONO WONYAKA NEMIBUZO YESIBINI: Umbono wasebusuku ukuya kwii-16 zeenyawo-ungaze uphoswe umzuzwana, imini okanye ubusuku, ngokubonakala ukuya kuthi ga kwi-16 yeenyawo kubumnyama obupheleleyo. Nxibelelana nosapho, abahlobo kunye nezilwanyana zasekhaya kwizixhobo eziselfowuni. Thetha kwikhamera okanye umamele ikhamera, akukho mgama wokunxibelelana nabani na.
UKUSETSHENZISWA KWE-Wi-Fi KUNYE NOKUPHAKATHI KWE-MOBILE: Ukuseta ngokukhawuleza kwe-Wi-Fi nge-IOS okanye kwi-Android Smartphone usebenzisa i-APP enikeziweyo. Ukufikelela kude kwikhamera kwi-Smartphone nge-IOS okanye kwi-Android Smartphone usebenzisa i-app enikeziweyo.
UKUPHATHISWA KWEVIDEO UKUBHALA: Rekhoda, ugcine kwaye uphonononge imifanekiso usebenzisa ikhadi le-Micro SD (ukuya kuthi ga kwi-128G) (Qaphela: ikhadi le-TF alifakwanga) kwaye ulawule ngokuthe ngqo kwifowuni yakho. Imifanekiso yokwazisa iya kugcinwa kwikhadi le-SD, kwaye ungadlala iividiyo kwifowuni yakho. Qaphela: Ukudlala kwakhona ngeKhadi le-MicroSD lasekhaya nge-APP, awunakufunda ikhadi le-SD encinci ngePC.
isisombululo: 1280X920P (1.3MP)
Ukunikezwa Amandla: AC100-240V
Isikhululo samandla: I-E27 / E26 port
I-Lens eyakhelwe ngaphakathi: 1.44mm, i-360 ° i-fisheye lens
Nokulolonga angle: 360 °
evakalayo: Intercom ezimbini
Umbonisi: ISONY CMOS IMX238LQJ
Iqondo lokushisa: -5-40 ℃
Ireyithi yefom yevidiyo: Ubunzima be25
Lens: PUWELL i-fisheye lens L013F1222MP3IR
Ukufakelwa komsindo kunye nesiphumo: Input: I-microphone eyakhelwe ngaphakathi; Imveliso: eyakhelwe kwisithethi
IR: Ukutshintshwa kwintshukumo yokumelana nomfanekiso, ukukhanya kwelanga ukukhanya kwimizuzu ye-10 yamitha, (ukukhethwa kwe-IR-CUT ngokuzenzekelayo ukutshintsha)
Ukugcinwa kwendawo: Ikhadi le-TF, inkxaso ephezulu 128G
Isenzo seAlarm: Umxhasi wefowuni ucofa i-Screenshots
Imfuno yoxhumo: I-akhawunti ye-WiFi / i-Showmo Cloud / Inkxaso ye-IOS 8.0 okanye i-Android 4.0 ngaphezu kwefowuni okanye ithebhulethi
I-1 X I-LED Bulb Light I-camera ye-WIFI
I-1 X I-E27 iskrini esongeziweyo
1 x 1 x 1 intshi
I-SPY030-I-Bulb efihliweyo yekhamera yemifanekiso
18780 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-13 Namhlanje
Amanqaku- Ikhamera yokuhlola
Abanye be Khamera ephathekayo
Ilungelo lokushicilela ngo-2011, i-OMG Consulting Pte Ltd iphuhliswe ngu	OMG Consulting Pte Ltd